Izindawo zokudlela ezithokomele nezisondelene e-Barcelona | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Barcelona, Spain amadolobha
IBarcelona, ​​indawo yokuzalwa yabapheki abakhulu, idolobha elifanele ukujabulela i-gastronomy enhle kunkampani ehamba phambili. Noma ngabe kugujwa usuku olukhethekile, usuku lokuqala, buyisa lelo thambo lezothando noma umane umangaze umlingani wakho ngoba nithanda ukuchitha isikhathi ndawonye, ​​eBarcelona uzothola zonke izinhlobo zokudlela eziseduze nezithokomele. Ukwenza umsebenzi wakho ube lula, sikunikeza okuthakazelisa kakhulu.
2 I-Italy encane
3 USergi de Meià
I-Yashima ingenye yezindawo zokudlela ezindala kakhulu zaseJapan eBarcelona, ​​engomunye wabokuqala ukuvula ukwethula okujabulisa ukudla kwaseJapan. Ngaphezu kwalokho, kule ndawo yokudlela okuhlangenwe nakho ngokwakho akukhona ukudla kepha futhi kuyindlela yokukuletha nefenisha. Isibonelo, e-Yashima ungadla ku- "kotatsu", igumbi elinamatafula asezingeni eliphansi futhi elinomata we-tatami waseJapane ngokwakho.
Ezinye izitsha zezinkanyezi zale ndawo yokudlela esemgwaqeni kaJosep Tarradellas 145, yizimbaza ezishubile ngenxa ye-yakisoba, i-steak tartare yaseJapan, i-prawn tempura noma i-fondue yemifino nenyama yaseJapan, phakathi kokunye okuningi.
Uma okudingayo isidlo sakusihlwa sothando eBarcelona futhi uthokozela umculo omnandi obukhoma, le ndawo yokudlela esenkabeni yesifunda esazalwa, iLittle Italy, kuzoba inketho yakho enhle kakhulu. Yindawo egcwele abaculi, abafundi kanye nezifundiswa ezinikeza indawo indawo ye-bohemian ethakazelisa kakhulu.
I-Italy encane yavula iminyango yayo ngo-1988 futhi kusukela lapho ayikaze iyeke ukuletha injabulo kubavakashi bayo. Ubusuku babo be-jazz buye baba yimpumelelo njengoba umculo wabo uphilisa kusihlwa futhi ifomethi ye-acoustic ivumela izingxoxo ezingenamsebenzi etafuleni elifanayo futhi ivimbela ukulalela izingxoxo phakathi kwamatafula, okulungele ubusuku bokuthandana.
Ngokuqondene nemenyu, eLittle Italy uzothola izindlela zokupheka zendabuko zaseMedithera lapho ama-carpaccios, ilayisi kanye ne-pasta, nemenyu ende kakhulu ye-cocktail elungele ukuthanda uthosi.
USergi de Meià
Ku-Calle Aribau 106 eBarcelona kukhona indawo yokudlela yaseSergi de Meià, indawo ekhanyayo nebukekayo ekahle yokwabelana ngomzuzu okhethekile ngenkathi ujabulela ukudla okumnandi.
Le ndawo yokudlela ibonakala ngokwazi ukuhlanganisa ukudla kwendabuko nokwasendaweni kwaseCatalan okunama-nuances we-Arabhu, isiJapane, isiPeru, iMexico noma isiFulentshi esiholele ekuvuseleleni izitsha ezinjengewundlu elihlwabusayo elinamazambane, igalikhi nerosemary, i-Fish suquet, irayisi yokudla kwasolwandle , Inkukhu eyosiwe yaseCatalan noma inhlanzi evela emakethe ngo-anyanisi onsomi namahlumela, phakathi kokunye.
Le ndawo yokucima ukoma yaseVenice eseJerusalem Street eceleni kweBoqueria enkabeni yeRaval ukubheja okuphephile kwesidlo sasebusuku sothando. Ukuqokwa kuzoba yimpumelelo enkulu uma ubeka itafula esitezi esiphezulu, esitholakala ngezitebhisi zalo zokhuni, ekhoneni lokugcina lekamelo elikhanyiswe kancane ukukhuthaza ubumfihlo.
Ngaphezu kwalokho, uzothandana nezitsha zeBacaro ngoba akuyona i-pasta yakudala yase-Italy ne-pizza kepha kunalokho kunikeza imenyu ehlukahlukene lapho imikhiqizo nezitsha ezinhle zinambitheka njengama-sardine ase-saor ahlanjululwe ngamagilebhisi omisiwe futhi e-anyanisi we-confit, i-gnocchi amazambane ane-duck ragout, i-risotto ene-nero di sepia noma i-beach squid enemifino.
Isithombe | Pinterest
Etholakala e-Olympic Village phambi kolwandle, i-CDLC ibonakala ngesimo sayo esikhethekile futhi esiyinkimbinkimbi. Umhlobiso wale klabhu yasebusuku enendawo yokudlela / indawo yokuphumula uyakhazimula futhi ulungele idina elisondelene kakhulu ngoba ungadla phambi kolwandle, ngenkathi umoya wasolwandle ukumboze ngokuphelele, endaweni ekhululekile yokuphumula enezindawo zokuphumula ezivalwa ngamakhethini ukuze uthole ubumfihlo obuningi.
Imenyu ibuswa ukudla kwaseMedithera okuthintwayo kwase-Asia nase-Arabhu. Zinezinhlobonhlobo ze-sushi enhle futhi ama-scallops awo aqoshiwe anemifino ahle kakhulu. Ngokuqondene ne-dessert, izithelo ezimnandi ezinoshokoledi nokhilimu isidlo esinconywe kakhulu futhi ukuqeda isidlo sakusihlwa esimangazayo, akukho okungcono kunebhodlela le-cava noma i-champagne.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Barcelona » Izindawo zokudlela ezithokomele nezisondelene eBarcelona